Isimo sezulu-kic sisiza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esinye sezikhali ezinamandla kakhulu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu ukuguqulwa kwamandla. Shintsha imodeli yethu yamandla iye entuthukweni entsha okuthi, ngaphandle kokungcolisa okuncane futhi kube nomthelela ekwehliseni ukufudumala komhlaba, okusho amathuba amasha ebhizinisi nawokuqashwa emikhakheni ehlukene.
Isimo sezulu-kic isinyathelo esisha esikhuthazwa futhi esixhaswe ingxenye enkulu yi Isikhungo saseYurophu Sokuqamba Nobuchwepheshe. UMiguel Arias Cañete, uKhomishani we-European for Climate Action, wethule lesi sinyathelo kanye noNobhala Wezwe Wezesayensi, uCarmen Vela kanye nomqondisi weClimate-Kic Spain, uJosé Luis Muñoz.
Lesi sinyathelo sinezinhloso eziningana, phakathi kwazo ushintsho kumamodeli wamandla aseYurophu kanti okunye ukukhiqiza amathuba ebhizinisi ekuvumelaneni nasekunciphiseni imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Kunemali nokutshalwa kwemali okulindelwe ukukwazi ukwenza amaphrojekthi amasha wezinto ezintsha nobuchwepheshe obuthuthukisiwe okusiza ukuthuthuka umnotho omusha womhlaba.
Onke amathuba avelayo kumele abanjwe futhi asetshenziswe ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Ukuze wenze lokhu, imigqa yokusebenza yalesi sikhungo ukuqeqesha ochwepheshe kumamodeli amasha abonakala ngabo ukusetshenziswa okuncane kwekhabhoni. Bafuna nokukhuthaza ukwenziwa okusha ezinkampanini, emanyuvesi, ezikhungweni zocwaningo kanye nasekuphathweni komphakathi; futhi ngisize labo abafuna ukuzibophezela kulolu daba.
Isimo sezulu-kic uqeqeshe ochwepheshe bamazwe angaphezulu kuka-2.000 200 ezingeni laseYurophu. Idale izinkampani ezicishe zibe ngama-XNUMX ezihehe utshalomali lwe- 189 million euro lapho kwenzeke khona ukuthuthukisa amaphrojekthi amasha angaphezu kwekhulu asiza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu.
Phakathi kwamacala okuqeqeshwa kongcweti okwenziwe eSpain kuye kwenziwa okwenziwa ngochwepheshe owaqeqeshelwa i-Climate-kic futhi kamuva, owathola umsebenzi eMkhandlwini Wedolobha iBenaguasil (eValencia) lapho eguqule khona ukuphathwa komjikelezo wamanzi, nge izinhlelo zokuhambisa amanzi esimeme ekuphathweni kwamanzi ezikhukhula okuhlonishwe ngemiklomelo ehlukahlukene.
“Kukhona amabhizinisi asebenzayo ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu, kanye namathuba okuheha utshalomali, ukudala imisebenzi, nokusheshisa ukuvuselelwa komnotho. Inselelo yokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokunciphisa kungasho inguquko entsha ezingeni lezimboni ", ungeze umqondisi we-Climate-Kic.
Ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu, kuyadingeka futhi ukwakhiwa kabusha komhlaba wonke lapho wonke amazwe athuthukisa izinqubomgomo zamandla okuhloswe ngazo ukuthuthukiswa okusimeme. Esinye sezikhali ezinhle kakhulu zokuhlelwa kabusha komhlaba wonke kwezomnotho, amandla noma indlela yokukhiqiza isivumelwano esamukelwe eParis ngoDisemba odlule.
Arias Cañete Ixwayise ngokuthi noma yiliphi izwe elisalele emuva ekuguqulweni kwamandla kuya emnothweni ophansi wekhabhoni lizoba nezindleko eziphakeme, lizoba namathuba ambalwa futhi lizobeka engcupheni yokusala emuva ezingxoxweni ezahlukahlukene.
Isivumelwano SaseParis ikhuthaza ukuqamba kabusha futhi iyinjini yenguquko nokukhula kwentuthuko esimeme namandla. Lolu shintsho okumele lwenziwe amazwe kumele lungalungiseki futhi lusheshe.
“Ukuqala ukusebenza kweSivumelwano SaseParis, esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyi-11, kuthumela umyalezo kubatshalizimali. Sibhekene nenhlangano enganqandeki. Kungakho kunjalo imizamo ebalulekile njenge-Climate-Kic, ukuze kusetshenziswe ithalente laseSpain ukukhiqiza imisebenzi kumodeli entsha yentuthuko. UCañete ungeze.
Ngokwengxenye yayo, uNobhala Wezwe Wezesayensi, UCarmen Vela uphawule ukuthi "ushintsho oluya kumodeli entsha yentuthuko seluzohlala". UVela ukwazile ukuthi iSpain inohlelo "olusebenzayo nolusebenzayo" lwesayensi, kepha ukuthi usemningi umsebenzi okumele wenziwe.
Ekugcineni, uVela wengeze ngokuthi kuyadingeka ukuthi ufinyelele ibhalansi phakathi kwezinto umkhakha kahulumeni onikelayo maqondana nokusungulwa kwamandla kagesi nokuthi yini okufanele umkhakha ozimele unikele ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Isimo sezulu-kic sisiza ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu